ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने पार्टी फुटाउने ? : संकटमा प्रचण्ड – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने पार्टी फुटाउने ? : संकटमा प्रचण्ड
प्रकाशित मिति : २०७७ असार २०
काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नछोड्ने चट्टानी अडानमा केपी शर्मा ओली देखिएपछि डबल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि पार्टी फुटाउने संकटपूर्ण स्थितिमा पुगेका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमध्ये ६ जना, ४४ सदस्यीय स्थायी समिति सदस्यमध्ये ३० जनाले एकस्वरमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिन माग गरे पनि दुवै पद नत्याग्ने अडानमा ओली कायमै रहेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह तनावमा परेको छ ।
शनिबार बस्ने भनिएको स्थगित स्थायी समितिको बैठक फेरि सोमबारको लागि सारिएको छ । यसबीचमा जतिसुकै गृहकार्य गरेपनि ओली अडानमा खासै परिवर्तन आउने देखिएको छैन । यता प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि ओलीसँग आत्मसमर्पण गरिहाल्ने स्थितिमा देखिएका छैनन् । पार्टी विधि पदद्धि सबै कुल्चिएर स्वेच्छाचारी रुपमा हिड्न बानी परेका ओलीको लागि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिले जेजस्तो निर्णय गरे पनि त्यसले केही फरक नपार्ने मानसिकतामा देखिएका ओलीले आफू निकटका कार्यकर्ताको नाममा पूर्व नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गरिसकेका छन् र अब संसदीय दल वा पार्टीमा २० प्रतिशतले पनि पार्टी विभाजन गरे दलको मान्यता पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दबाब समूह बनाएर दबाब दिए पनि त्यसले ओली र प्रचण्डलाई केही असर पारेको छैन । ओली–प्रचण्डको शुक्रबारको संवादपछि नेकपाको शक्तिसंघर्ष थप जटिल बन्न पुगेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा मागे पार्टी विभाजन हुने र आफूलाई कारबाही गरेर देखाउन पनि प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् ।
ओली प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट कुन कुन नेतालाई आफूतिर तान्न सकिन्छ भनेर निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । ओलीबाट निरन्तर धोका पाएको भन्दै प्रचण्ड –नेपाल गठबन्धनमा लागेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई फकाउन बालुवाटारले फेरि पनि कोसिस गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको बालुवाटार छलफलपछि महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमलाई उनकै निवास भैँसेपाटी गएर भेटेका थिए । शुक्रबार साँझ पनि ओली समूहका अन्य नेता गौतमनिवास पुगेका थिए । ओलीले आफ्ना समर्थकहरुलाई आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन गर्न समेत लगाएका छन् ।
संशोधनवादी र अवसरवादी बाटोमा बुर्कुसी मार्दै दशवर्षे जनयुद्धबाट आर्जित आफ्नो सारा शक्ति बिसर्जित गरेर ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको अगाडि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन अहिले पनि सकिरहेका छैनन् । उनले आफ्नो धरातल छाडेर ओली–नेपालहरुको धरातलमा उभिन पुगेपछि प्रचण्ड डबल नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा नैतिक हिसाबले कमजोर खेलाडीको रुपमा देखिएका छन् । नेपाल समुहले प्रचण्डलाई ओलीका विरुद्ध प्रयोग गरिरहेको बुझेका ओलीले प्रचण्डको भनाइ र गराइलाई खासै महत्व दिएका छैनन् । ओलीले एकता गर्दाको सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाएको भनेर प्रचण्डले अहिले जति रोइकराइ गरे पनि त्यसको खासै अर्थ देखिन्न । र, प्रचण्डले ओलीसँग विद्रोह गरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्ने हिम्मत प्रदर्शन गर्ने स्थिति पनि देखिएको छैन ।
अब ओलीको हरेक सर्त मानेर ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्न प्रचण्ड र नेपाल समुह तयार भए मात्र कथित एकता बच्ने नत्र टिक्ने आधारहरु समाप्त भएर गएको देखिन्छ ।
त्यसमाथि पनि डबल नेकपाभित्र नेताहरु आफ्नो निर्णय गर्न र लिन स्वतन्त्र छैनन् । नेताहरु कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रको दलाल छन् । आफ्ना मालिकहरुको निर्देशन जे हुन्छ, त्यही गर्न उनीहरु बाध्य छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले डबल नेकपाको एकताबाट कुनै फाइदा हासिल गर्न सकेनन् भने फुटाइदिन सक्छन् । यसर्थ, नेकपाको फुट वा एकता विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको आपसी स्वार्थमा निर्भर रहेको छ । डबल नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा विदेशीको छायाँ देखिन्छ । आफ्ना सत्तास्वार्थ पूरा गर्न विदेशीको बुइँ चढ्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक छन् ।